Funda ukuthi uyifaka kanjani iSiqalisi se-Z sika-Nokia ku-Android | Izindaba zamagajethi
Isiqalisi se-Z uhlelo lokusebenza lwamahhala oluthandekayo ebesingalulanda silufake manje, uma sifuna Unedivayisi yeselula ehlelwe kahle kakhulu ye-Android. Ithuluzi lethulwe ngokusemthethweni ngoLwesithathu olwedlule, manje selinenqwaba yabalandeli abenelisekile ngalokho uNokia akuphakamisile.
Uma ngabe ubungazi, AbakwaNokia ngunjiniyela walesi siqalisi esibizwa nge-Z Launcher, ehambisana nezinhlobo ezithile zamafoni namadivayisi eselula ngokujwayelekile. Okwamanje, ithuluzi liphakanyiselwe uhlelo lokusebenza lwe-Android, selumemezele ukuthi kungekudala (uma i-Apple iyivumela) kuzoba khona nohlobo lwamadivayisi eselula ane-iOS; Noma kunjalo, Isiqalisi se-Z sisesigabeni se-beta ngakho-ke, ayizange isingathwe ku-Google Play Isitolo ngoba umkhiqizi waseFinland ufuna ukulanda kwenziwe kusayithi elifanayo elisemthethweni. Uma kunjalo Ngingayilanda kanjani futhi ngiyifake le Launcher kudivayisi yami ye-Android?
Izinyathelo zokufaka isiqalisi se-Z kudivayisi yethu ye-Android
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngalokho okumelelwa yi-Z Launcher, siphakamisa ukuthi ubuyekeze izindaba ezashicilelwa emahoreni ambalwa ngemuva kokuqaliswa kwazo ngesixhumanisi esilandelayo. Ngoba inani elikhulu labantu lifune ukuba nalolu hlelo lokusebenza lwe-Android kumadivayisi wabo weselula, labo abazibheka njengabasebenzisi abaphambili abanazo izinkinga ngenkathi benza lo msebenzi; kepha kukhona nabasebenzisi be-novice kulo mphakathi we-Android, ngubani, engatholi ithuluzi esitolo se-Google sokudlala Bakuyekile nje ukuzama ukuba nakho esigungwini sabo, yingakho sizinikele kule ndatshana lapho sizokhombisa igxathu negxathu futhi kufakwe nezithombe, ngenqubo okumele yenziwe ukufeza inhloso yethu:
Lapho sesikudeskithophu, sibheka isithonjana se- Ukucushwa (noma izilungiselelo).
Sizongena endaweni ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esifanele.
Uma sesilapho, kufanele siye kuthebhu Ukuphepha kusuka kubha eseceleni kwesobunxele.
Lapho kuzofanele sihlole ibhokisi eligunyaza ukufakwa kwezicelo ezivela emithonjeni engaziwa.
Lapho sesiqhubeke ngezinyathelo esiziphakamisile ngenhla, sesikulungele ukuzama landa bese ufaka iZiqalisi Z kumakhalekhukhwini wethu; Kubalulekile ukuthi sisho ukuthi inqubo ishiye umnyango uvulekile kuphela ukuze kufakwe izinhlelo zokusebenza ezingaveli ngqo esitolo se-Google sokudlala, ngenxa yokuthi iNokia ifake uhlelo kuhlobo lwe-beta, ngaphakathi kwesiza sayo esisemthethweni.
Manje kufanele siqonde kuye Ikhaya kusuka kudivayisi yethu ye-Android.
Uma sesilapho sikhetha isithonjana sesiphequluli se-Intanethi.
Kuzofanele siye kuwebhusayithi esemthethweni yokulanda yeZ Launcher
Sizothinta inketho ezosivumela ukuthi silande uhlobo lwe-beta.
Ngesikhathi senqubo yokufaka, kuzovezwa iwindi elizositshela ukuthi uzokwazi ukufinyelela kulwazi oluthile kudivayisi yethu yeselula; Kufanele silamukele leli windi noma kunjalo, singakhipha uhlelo uma singafuni ukuthi lezi zimvume zisebenze.
Iwindi elilandelayo lizositshela ukuthi uhlelo lokusebenza luzofunda emikhubeni yethu ku-terminal. Lapha kuzodingeka sicindezele kuphela inketho Qala.
Isifundo esincane sizovela ewindini elilandelayo, into okufanele siyilandele ukuze sifunde okwengeziwe ngokuthi iZ Launcher isebenza kanjani.
Zonke izinhlelo zokusebenza ezifakwe kudivayisi ye-Android zizovela ohlwini efasiteleni elilandelayo.
Kuze kube manje sifake futhi salungiselela i-Z Launcher ku-terminal yethu, ukungadingi ukwenza noma yini eyengeziwe ukuqala ukusebenza nalesi siqalisi esisha esiphakanyiswe ngabakwaNokia; Lapho sifuna ukuthola uhlelo oluthile, kuzodingeka sidwebe ngomunwe esikrinini, incwadi yethuluzi elishiwoyo, livele ngokushesha imiphumela embalwa kuye ngokuthi sifake ini kuselula ye-Android. Phakathi kwemiphumela, abanye oxhumana nabo nabo bangavela, inqobo nje uma sinezicelo ezibandakanya lolu hlu.
Njengoba singakubonga, iZ Launcher yisisombululo esihle kulabo abafuna ube nedeski elihleliwe futhi kulula ukuyiphatha ngezinhlelo zakho zokusebenza ezifakwe ku-terminal.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungalanda futhi ufake kanjani isiqalisi se-Z kudivayisi yethu ye-Android
Khulisa ubumfihlo bethu ku-Windows nge-DNSCrypt